Zviuru neZviuru Zvevatsigiri veMDC-T Zvoratidzira Muguta reBulawayo
Zviuru nezviuru zvevatsigiri vebato guru rinopikisa munyika reMDC zvaratidzira muguta reBulawayo nhasi zvichitsutsumwa nemamiriro akaita zvinhu munyika.
Asi mutungamiri webato iri VaMorgan Tsvangirai vange vachitarisirwa kuti vanogona kungosvika havana kuzokwanisa kuuya. VaTsvangirai avo vange vasinganzwe zvakanaka vange vachirapwa kuSouth Africa.
Mutevedzeri waVaTsvangirai amai Thokozani Khupe nemunyori mukuru webato VaDouglas Mwonzora ndivo vange vachitungamira kuratidzira uku. Kuratidzira uku kwatanga nenguva dza 9 mangwanani paBulawayo City Hall. VaMwonzora vaudza Studio 7 kuti vanofunga kuti vanhu vauya vanodarika chuuru zana.
VaMwonzora, VaMoyo naVaBanda
Vanhu vauya pakuratidzira uku vange vakatakura zvinyorwa zvakanzi ‘Missing; US$15 billion, $15 billion = $1000 00 per person Ne 15 bhidza maproblems atsakatika disappear!” Mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe ndivo vanenge vakazvisikira mot muziso apo vakatenda voga kuti mari inosvika madhora mabhiriyoni gumi nemashanu yainge yabiwa kwaChiyadzwa kunocherwa mangoda.
Vanhu vange vachitsutsumwawo nenyaya yekushaya mabasa, hurombo uye kutyorwa kwekozdero dzevanhu.
VaTsvangirai vakazivisa kuti kuratidzira uku kuchazoitwa mumatunhu ose enyika kuratidza kwebato iri kusafarira mamiriro akaita zvinhu munyika.
Kuratidzira kweMDC-T kunoteverawo kuratidzira kwayakaita muHarare mwezdi wapera uye kuratidzira kwakaitwa nebato riri kutonga reZanu-PF richiti riri kutsigira mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe.
VaMugabe vakasimuka munyika nemusi weChishanu vakanga kuPapua New Guinea kumusangano weAfrican, Carribbean and Pacific Group States. Asi vatungamiri venyika dzakawanda vakatumira nhumwa dzavo chete zvichireva kuti VaMugabe ndivo voga mutungamiri wenyika yekunze akaenda kumusangano uyu uchakurukura nyaya dzehumhizha munyaya dzekurima.
Mutauriri weMDC-T VaObert Gutu vashora VaMugabe zvikuru vachiti gore rino chete vashandisa mari inodarika mamiriyoni makumi masere nenzendo dzavo dzekunze. Vati pavatungamiri venyika dzepasi rino VaMugabe ndivo vane mhenduru yekusagara pasi sedzvatsvatsva.
Kuratidzira kweMDC-T kwainge kwamborambidzwa nemapurisa achiti bato iri raizogona kuita mhirizhonga asi izvi zvakarambwa nedare repamusoro. VaMwonzora vaudzawo Studio 7 kuti vave kuronga kunoratidzira muguta reMutare musi wa 11 Chikumi vasati vaendazve kuMasvingo.